Metal iminyango: Kungani bewumsebenzi yizinto ezibaluleke kakhulu kunokwenza intengo?
Metal iminyango engcono, akulungele zikhathi zonke ukuvikela okungenani ezinye isakhiwo aphume Ukungena kulo amasela. Lesi siphakamiso okwamanje akanalo isidingo sokuqinisekisa futhi cishe bonke bakwazi ukuqinisekisa le practice. Nokho, kukhona impikiswano ukuthi umnyango esenqatshelwe yokukhiqiza i Thenga kangcono. Abanye bathambekele iminyango eyenziwe zindlela zezimboni kanye nezinye emnyango ezenziwe ekhaya ekhethiwe.
Isikhubekiso, kuleli cala itholakala lokuthi ukuthi umnyango Artisanal metal - intengo, ikhwalithi ephansi kakhulu kunalokho ifektri. Kodwa okwamanje sizama ukuxazulula umbango, kanye isampula izozama ukuletha kuwe kunamadodana ingozi umthengi, ngokukhetha inketho engabizi kakhulu.
Ngokuvamile, abahwebi iminyango steel ezenziwe ezimweni esikhashana, wenze Ukugcizelelwa yokuthi uma imikhiqizo yabo zibukeke cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka nozakwabo efektri. Nalokhu kungaba ayavumelana nalokhu, njengoba, mhlawumbe, futhi ngempela kunjalo, kodwa izinga kuphela ezinyangeni zokuqala ezimbalwa ukusetshenziswa. Ngemva kwalokhu ukungapheleli senqubo yokukhiqiza izenze wazizwa: umbala ilahlekelwa ukugcwaliswa nekucala ukukhuphuka round; umnyango ngokulinganayo sags like nomthelela ongemuhle izinkintsho zawo; ibhokisi kuyinto sikhubazekile. Okwamanje, kuphela izinkinga esivamile yabalwa. Mhlawumbe unalo ikhono hhayi kuphela kuholele shift uhlobo olubi kakhulu iminyango yangaphandle, kodwa futhi yokuthi kwakuyoba nzima ukuze wambule a yayenza ngokungacabangi ngokuphelele, futhi uma ivulwa, umnyango uyoveza creak okungabekezeleleki enqabeni.
Little umnyango izindleko metal lisitshela ukuthi, uma behlome ngemibese yenziwe ngobudlabha imishini nokufakwa, uma kubhekwa oqotho imali esifushane ukusebenza wayefisa umkhiqizo wokugcina. ochwepheshe Underground ukuthi akudingeki elihambisana nezitifiketi namalayisense, ngeke ufake umkhiqizo ayo (mhlawumbe kuhlanganise mahhala) ukuze umnyango wema izinyanga eziningana, hhayi ukudala izinkinga. Khona-ke kuyoba omkhulu ukwenza Ukuvinjwa umsebenzi owodwa. Ngakolunye uhlangothi kuhle, akekho akehlelanga ekamelweni, kodwa ukuphuma ke futhi akekho akusebenzi. Nokho ngokuphambene nalokho, kukhona okungase kufaniswe isibonelo.
Frugality lapho ngithenga izinto zokwakha ubhekwa ngenxa yokuthi, njengoba uma ezenziwe ngensimbi, elisesifundeni imibono yabantu kubhekwa Isihlangu abaphuli kuyinto Lure ethize, njengoba izimo ezihlukene "umndeni" yokukhiqiza has zonke amathuba wokuba bacele umaluju ummese ezivamile. Kubandakanya ukubaluleka elincane kakhulu ukuvikelwa iminyango efana engathandi ukuhlinzeka.
Ukudala izicabha zensimbi kubhekwa ngale isinyathelo kwezobuchwepheshe. Kungcono cabanga izikhathi ezimbalwa imiphumela okungafunwa, ngaphambi kuka ukuze alinge ukuthenga iminyango ezenziwe ngesandla. Ingabe ukushaja ukuphepha siqu nabathandekayo babo, futhi ukuphepha zonke nayizimfundamakhwela ingcebo. abakhiqizi abaningi batusa kokufaka iminyango umlilo iminyango ifektri - futhi lokhu kukho okuhle kakhulu. Cabanga, njengoba sadlala imali yokuthenga ukufakwa umnyango metal abampofu uyakwazi ukuba namanje hhayi umphumela odabukisayo kuthengiselana.
Laminate White, ukusetshenziswa ingaphakathi
Umphetho kwesihenqo - nice futhi kulula!
Esakhelwe ngaphakathi odongeni izibani: Uhlolojikelele, incazelo izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Tincture chestnut kusukela varicose emithanjeni: iresiphi
Indlela uxhuma isiginci sikagesi kwikhompyutha - ngokushesha futhi kalula!
Smalt - Iyini? Amaphethini smalt KaMose
Njengoba indoda kuthinta nemvelo - umbuzo nzima
Dress Chanel - ubuhle, evivinywa isikhathi
Kuyini "Ukuphepha"? Ukubuyekezwa kwe-anti-virus software